Isu tinoongorora azvino maitiro munyika yeCommerce | e-commerce nhau
Isu tinoongorora azvino maitiro munyika yeCommerce
ECommerce nhau | | eCommerce
Hapana mubvunzo kuti zvichangobva kuitika zvatakasangana nazvo padanho repasirese zvakareva a kuputika kune simba kwe e-commerce munguva dzekupedzisira. Chimwe chinhu icho, chakaturikirwa kuita manhamba, chinoreva kuti chinenge chikamu chimwe muzvina chevaSpanish vakatenga pamhepo kamwechete pasvondo, nezvikamu zveavo vanozviita kamwe chete mazuva gumi nemashanu kana kamwe chete pamwedzi zvakafanana.
Mamwe manhamba anomiririra kuwedzera kunoshamisa kwekupinda kwekutengeserana kwemagetsi, mumamiriro ezvinhu umo makambani anowedzera kuzviwana aine kudiwa kukuru asi anofanirwawo kukwikwidza zvine mutsindo kuti awane mukana mumusika. Kuti uite izvi, hapana chinhu chiri nani pane kuziva kuti chii azvino maitiro mumusika wepamhepo.
1 Kukosha kwekuchengetedza
2 Chengetedza kuvepo kwepamhepo
3 Kuvandudza tekinoroji - hungwaru hwekugadzira
4 Kukosha kwemazuva ekupedzisira
Munguva iyo zvinhu zvose zvinofanira kuva nemaonero akasvibira uye ecological, electronic commerce inewo basa rayo. Parizvino, kusimba kwechero chigadzirwa kana sevhisi kwakakosha kukwezva nhamba yakakura yevatengi. Muchokwadi, inoda kusvika hafu yevatengi vanoreurura kuti zvavanosarudza kutenga zvinopesvedzerwa nechinhu ichi. Naizvozvo, kana isu tichikwanisa kugadzira e-commerce sisitimu ine yakaderera kukanganisa kwezvakatipoteredza uye isu tichiziva nzira yekuitaurira zvine mutsindo kune vashanyi vedu, isu tichava nehukuru hukuru hwekuwana mukana mumusika.
Chengetedza kuvepo kwepamhepo
Chimwe chinhu icho chero kambani inotarisira kutengesa online kana kuwana chinzvimbo chakasarudzika mumusika inofanirwa kuve nayo. chengetedza kuvepo kwako online. Chimwe chinhu chinokanganisa zvese zvine chekuita nemagadzirirwo ewebhusaiti, mashandisiro ayo uye mufananidzo wayo. Asi zvakare nezvinhu zvakaita sechinzvimbo chakanaka mumisika iyo iyo kambani inoda kutarisisa kuita kwayo.
Basa umo zvakakosha kuve ne link kuvaka agency pamwe nemamwe masevhisi ehunyanzvi mumunda, ayo anobatsira kukwirisa kushambadzira kwekudyara uye kuwana mhedzisiro iri nani.
Kuvandudza tekinoroji - hungwaru hwekugadzira
Vatengi vakawanda vanozviti hungwaru hwekugadzira hunoita kuti hupenyu hwavo huve nyore, inenge 80%. Kuvapo kwemhando dzese dzemidziyo inoshandisa masisitimu aya kuri kuramba kuchiwedzera uye imwe yeazvino maitiro ndeyekubatanidza. web artificial intelligence systems izvo zvinokwanisa kupa mhedzisiro iri nani kune vashandisi uye vatengi. Pakati pemabasa anonyanya kudiwa nevashandisi ava mamwe akadai sekutsvaga kwezwi, kwakabatana nevabatsiri vemazuva ano, pamwe chete nehurongwa hwekufungidzira hunobatsira vatengi kuwana zvavari kutsvaga nyore nyore.
Kukosha kwemazuva ekupedzisira
Tiri kurarama munguva apo kukurumidza kwakakosha. Takaenda mazuva ataifanira kumirira vhiki kana maviri kuti tigamuchire odha uye vatengi vazhinji vanosiya chitoro chepamhepo kana vakaona kuti nguva yekuendesa yezvavanenge vachizotenga yakarebesa.
Ichi chikamu imunda wekuvandudza kune makambani ane nguva refu yekutumira. Tsvaga mudiwa akanaka maererano nekugovera kana kuvandudza hurongwa hwemukati hwekambani kuti kuderedza nguva dzekugadzirisa yeodha inogara iri sarudzo yakanaka kuitira kupa nguva pfupi yekutumira kune vatengi. Zvese izvi pasina kukanganwa zvazvino maitiro akadai senge "tinya uye unganidza", iyo mutengi anogona kukurumidza kutora muchitoro zvaakatenga pane network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Isu tinoongorora azvino maitiro munyika yeCommerce